नङ डिजाइन पन्नी: पांच शानदार विकल्प
ठीक पन्नी संग डिजाइन नङ गर्न, यो यसको प्रकार निर्धारण गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ। बिक्री मा त्यहाँ तिनीहरूलाई प्रत्येक आवेदन यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्, यो लोकप्रिय सामाग्री को धेरै किसिमहरु हो।
पलिश को पन्नी प्रकार
स्थानान्तरण पन्नी को टास्ने आधार लागू गरिएको छ। यो सजावटी सामाग्री को एक किसिम एक धेरै, सुविधाजनक सरल र सुलभ छ। सानो रोल बिक्रि फरक रंग को, ढाँचासँग, उदाहरणका लागि, सर्प छाला को रूप मा हुन सक्छ।
पाना वा पन्नी पानाहरू वा रोल मा बेचे। यो एक पारंपरिक पातलो Metallized "कागज" को एक विशेष दृश्य छ, रंग वा ढाँचाको इम्बोस गरिएको सकिन्छ। यो सम्भव छ किनभने कुनै पनि तत्व कटौती गर्न।
डिब्बे बिक्रि पन्नी Tighting र जस्तै पातलो टुक्रा, छ सुन पात। विभिन्न रंग मा प्रस्तुत। को सजावटी सामाग्री संग नङ डिजाइन एक्रिलिक र जेल काम व्यवसायीक बीच लोकप्रिय छ।
पन्नी Minx - यो नङ स्टिकर, आफ्नो आकार दोहरो, तिनीहरूले तापमान को प्रभाव अन्तर्गत निश्चित छन्।
पन्नी को पतली स्ट्रिप्स। रोल बिक्रि र समाप्त मैनीक्योर सजाने लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रत्येक दृश्य को डिजाइन सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्। कुनै पनि कमीकमजोरी लुकाउन गर्न पनि उज्ज्वल र देखिने एक मैनीक्योर - तिनीहरूलाई साधारण अलग सामान्य उपकरण देखि धैर्य को एक भारी खुराक आवश्यक हुनेछ, कि छ।
स्थानान्तरण पन्नी नङ। कसरी प्रयोग गर्ने
केहि कटौती गर्न कुनै आवश्यकता: यसको फाइदा तपाईं कैंची पन्छाएर गर्न सक्ने छ। यस प्रकारका पन्नी संग नङ डिजाइन सरल र छिटो छ। को नङ लाह आधार कवर, हावा यसलाई सुक्खामा, र त्यसपछि गोंद को पातलो पत्र लागू हुन्छ। को नङ को पन्नी मैट पक्ष राम्ररी संलग्न एक कपास swab ध्यान यो समतल। त्यसपछि छिटो, तर सही गति हटाउनुहोस्। स्थानान्तरण तह आफ्नो हात मा मात्र पातलो plenochka एक को नङ को "औंठाछाप" छ, नङ मा रहनेछ। को सहज तपाईं एक आधार कोटिंग र टास्ने, अधिक सही परिणाम हुनेछ व्यवहार गर्नुभयो छन्। केही त यो राम्रो छ राख्न, मैनीक्योर शीर्ष कवर पछि तयार घण्टा, अन्यथा यो डिजाइन तपाईं एक दिन खुसी हुनेछ। पन्नी अनुवाद पलिश पनि यस्तो कुनामा रूपमा नङ को रिलीज लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
पन्नी संग नङ डिजाइन, पानाहरू बिक्रि छ जो, धेरै फरक छ: कुनै पनि सानो वस्तुहरूको बाहिर कटौती वा, ऐना प्रभाव प्राप्त सम्पूर्ण नङ मा लीन सकिन्छ। सुरक्षित गर्न यो सजिलै विशेषता स्टोर वा पारंपरिक clearcoat पाइन्छ कि एक विशेष टास्ने आवश्यक हुनेछ। इच्छित आकार तत्व stiffen गर्न चिपके, तर अझै पनि भिजेको लाह, सुकेको, त्यसपछि एक fixative संग लेपित। यसरी यो पन्नी वा हाइलाइट कुनामा एउटा ज्याकेट बनाउन सम्भव छ। तपाईं एक टास्ने प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो आधार को अन्त सम्म अझै पनि भिजेको नङ पालिस मा पनि लागू गर्नुपर्छ। त्यहाँ तोड्न एउटा जोखिम छ, चिमटी एक जोडी किन्न यो सामाग्री राम्रो परिमार्जन गर्न हात। तपाईं एक धातु पन्नी चिल्लो नङ को मद्दतले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कडा परिश्रम गर्न छ। पहिले, तपाईंले ठिक कैंची नङ को रूप मा workpiece कटौती हुनेछ आवश्यक छ। तिनीहरूले convex नङ भन्दा वितरित गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूले, एक सानो चीरा छ। त्यसपछि तिनीहरूले अझै पनि uncured clearcoat र बिस्तारै चिल्लो मा राखे। मुश्किल पन्नी पर्याप्त पातलो, तर लोचदार छैन, र अझै creases वा झुर्रियाँ बिना यो राख्नु छैन भन्ने छ।
यस प्रकारका पन्नी संग नङ डिजाइन - यो पक्कै एक छुट्टी विकल्प छ। यो पनि गोंद संग संलग्न छ। यो नङ केही टुकडे मा राख्न सुविधाजनक छ। सरल, तर धेरै प्रभावकारी डिजाइन विकल्प - जेल को धेरै पत्रहरु बीच पन्नी को सानो चमकदार टुक्रा। यो जलजीवालय मैनीक्योर रुप र हावा, र झन्झन्। प्राकृतिक नङ पनि शानदार कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, एक आधार कोट लागू, यो सुक्खामा। त्यसपछि गोंद लागू हुन्छ। पन्नी चाहेको आकार को एक तयार टुक्रा forceps संग लिएको र इच्छित स्थान लागू, त्यसपछि काठ छडी वा अन्य कुनै पनि उपयुक्त उपकरण थिचिएको। तयार डिजाइन पारदर्शी वार्निश ढाकिएको छ। यसरी यो एक शानदार मैनीक्योर मोशाको फ्वायल्स विभिन्न रंग संयोजन, र थप गर्न सम्भव छ।
Minx पन्नी संग नङ डिजाइन - यो आवश्यक एक शानदार दर्पण समाप्त छ। यो सिकारी हुन सक्छ प्रिंट, पुष्प ढाँचाहरू, स्कटिश पिंजरे र अधिक। यो पन्नी लागू रूपमा? पहिलो, नङ प्लेट तयार नङ, पीसने पालिस, कीटाणुरहित र degreased। त्यसपछि सबै अतिरिक्त अग्रिम वा लेबल नङ मा पहिले देखि नै छ पछि कटौती गर्न सकिन्छ, उपयुक्त आकार Minx प्लेट चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि शानदार patterned पट्टी आधार हटाइएको छ र अलिकति पनि रेज मा खुसीले गदगद , इन्फ्रारेड दीपक को को पट्टी एक predetermined धक्का cuticle संग नङ लागू भएपछि, लोचदार बन्न। राम्रो Wield सुन्तला छडी, पनि आधार देखि स्टिकर हटाउन र cuticle तर्फ सार्न र नङ मा स्टिकर बाहिर चिकना गर्न उपयुक्त छ जो। त्यसपछि पर्चा अतिरिक्त आफ्नो औंलाहरु संग थिचिएको। त्यसपछि नङ फाइल, तपाईं तल पर्चा सबै अनावश्यक भागहरु कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। अब समेकन को चरण आउँछ। को नङ बत्ती र गरम अन्तर्गत राखिएको थियो। अन्त मा, यो समाप्त डिजाइन शीर्ष ढाक्न मनमोहक छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता लेबल अन्तर्गत पनि एक आधार आवश्यक छैन। मुख्य कुरा हो - सकेसम्म चिल्लो नङ सतह धेरै। को मैनीक्योर हटाइयो धेरै सरल छ - तपाईं तातो पानी मा नङ पकड5मिनेट आवश्यक छ।
नङ डिजाइन पन्नी स्ट्रिप्स
यस्तो पट्टी धेरै बहुमुखी र प्रयोग गर्न सजिलो छ। तिनीहरूले neprosohshy वार्निश गर्न चिपके छन्, सबै अनावश्यक कटौती नङ कैंची, परिणाम असुरक्षित शीर्ष अन्त कोटिंग। स्ट्रिप्स धेरै सहज उनि एकदम वार्निश को विभिन्न रंग बीच चिटिक्क सीमाहरु लुकाउन सक्नुहुन्छ किनभने, multicolored मैनीक्योर गरिरहेको छ। यो धेरै सुशील र स्टाइलिश एक पन्नी संग ज्याकेट देखिन्छ: यस्तो गाढा नीलो जस्तै रंग, को नङ लाह कोट। निःशुल्क किनारा, अलिकति अन्त देखि सिकुड मा, ठाँउ को एक वा दुई पातलो स्ट्रिप्स सुनको पन्नी वा चाँदी। बिस्तारै ठिक अन्त सुन्तला लाठी धक्का। सुक्खा र शीर्ष चित्रकला समाप्त सुरक्षित। एक मैनीक्योर ध्यान गरेको छ भने, ध्यान र अरूको प्रशंसा प्रदान।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, नङ डिजाइन पन्नी - मात्र एक शानदार Chrome नङ छ। यो पनि केवल रचनात्मक मन लागि गरिन्छ भन्ने अवसर धेरै छ। परीक्षण र अरूलाई मूल मैनीक्योर विस्मित!
डिजाइन "एक भिजेको जेल वार्निश मा Rose।" प्रदर्शन प्रविधी
जेल नेल पलिश RuNail MultiLac: गुणहरू, मशीनरी को विशेष गरी प्रयोग। "Multilak Runeyl": समीक्षा
नङ पर्चा - सबै अवसरका लागि मूल मैनीक्योर
सब्जी-वासुलर डस्टोनिया के हो र यसलाई कसरी लड्न सकिन्छ
Kefir-स्याउ आहार: आफैलाई फिर्ता सामान्य दिन
कुनै पनि समस्या बिना परीक्षाहरू लागि तयारी
अगाडि सडक ढोका: उद्देश्य र सुरक्षा को प्रकार
"अन्तिम चेतावनी": phraseologism मान, मूल कथा
कसरी न्यूनतम लगानीको संग स्क्राच देखि एक व्यापार खोल्न: विचार र सिफारिसहरू
AMD प्रोसेसर: विद्यमान समाधान को एक सिंहावलोकन
ऐबालोन Resort2* - ठूलो मूल्य होटल
तिनीहरूले हरेक दिन चिनियाँ खान? चिनियाँ आहार
दबाइ "Clemastine": प्रयोग र औषधिको खुराक, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन